PwintsSan – Page 147
မြန်မာနိုင်ငံ ငွေကြေး အပါအ၀င် ကမ္ဘာ့ တန်ဖိုးအနည်းဆုံး ငွေကြေးများ – မြန်မာအဆင့် ဘယ်လောက်ရှိလဲ
April 5, 2018 twl 0
ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအနည်းဆုံး ငွေကြေးများ လူ အတော်များများက အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ ဆွစ်ဖရန်၊ ဗြိတိသျှပေါင်၊ ယူရိုငွေကြေး စသဖြင့် တန်ဖိုးမြင့်မားပြီး ခိုင်မာတဲ့ ငွေကြေးစနစ်တွေကို သိကြပါတယ်။ အဲဒီငွေကြေးစနစ်တွေက သူတို့ကို ထုတ်လုပ်သုံးစွဲတဲ့ နိုင်ငံတွေကဲ့သို့ပဲ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုလောကမှာ သြဇာအာဏာ ရှိကြတဲ့ ငွေကြေးစနစ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိပြီး အခိုင်မာဆုံးသော […]
ဗိုလ်မှူးအာကာဝင်းဟာ လေထီးနဲ့ (eject jump) ခုန်ထွက်တာတောင် သေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ဗိုလ်မှူးအာကာဝင်းဟာ လေထီးနဲ့ (eject jump) ခုန်ထွက်တာတောင် သေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း လေထီးနဲ့ eject jump ထွက်တာတောင် သေတာလား ? ဘာလို့လဲ? ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရိုးရိုးပဲတွေးကြည့်ရအောင် လေယာဉ်စပြီး ချို့ယွင်းပြီဆိုတာနဲ့ ပိုင်းလော့ကသူ့လေယာဉ်ဘာဖြစ်လဲသူသိပါတယ်.. ဟုတ်ပြီ သိသိခြင်းထွက်လိုက်ပြီထားတော့ .. ဒါဆို ဗိုလ်မှူးအာကာဝင်း […]
အားကျ အတုယူဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် လိုက်ဖက်ညီတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူချစ် ဆယ်လီဇနီးမောင်နှံ (၁၀) တွဲ
အားကျ အတုဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် လိုက်ဖက်ညီတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူချစ် ဆယ်လီဇနီးမောင်နှံ (၁၀) တွဲ မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာလည်း သက်တမ်းရင့်အိမ်ထောင်စုံတွဲတွေ၊ ဘဝပန်းတိုင်ကိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖေးမရင်းနဲ့ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ပြည်သူချစ်ဆယ်လီဇနီးမောင်နှံတွေ ရှိပါတယ်။ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ တွဲလက်ခိုင်မြဲပြီး အခုလိုပဲ အားကျအတုယူဖွယ်ကောင်းတဲ့ စံပြဇနီးမောင်နှံတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ (၁၀) ကိုခန့်နိုင် […]
“ကလိန်စေ့ငြမ်းဆင်၊ ကလိန်ကကျစ်၊ ကလိန်ခြုံ ဆိုတဲ့ဝေါဟာရ” နှင့် ကလိန်စေ့ဆိုသည်မှာ
“ကလိန်စေ့ငြမ်းဆင်၊ ကလိန်ကကျစ်၊ ကလိန်ခြုံ ဆိုတဲ့ဝေါဟာရ” နှင့် ကလိန်စေ့ဆိုသည်မှာ ကလိန်စေ့ဆိုသည်မှာ သေးသေးငယ်ငယ်မျှသာ ရှိ၏။ ထိုကလိန်စေ့ပေါ်သို့တက်ရန် ငြမ်းဆင်နေသူမှာ ပြက်ရယ်ပြုစရာသာဖြစ်၏။ စကားပုံမှပေးသော အတွေးအမြင် လယ်တွင်းသား စောချစ် ကလိန် Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. Synonyms Caesalpinia bonducella (L.) […]
အခမဲ့ ပြည့်​တန်​ဆာရုံနဲ့တူလာ​သော အခမဲ့ ပြည့်​တန်​ဆာရုံနဲ့တူလာ​သော ​မြန်​မာပြည်​အွန်​လိုင်းမှမြန်​မာမိန်းက​လေး​အများအပြား မြန်​မာနိူင်​ငံဆိုတာ ယဉ်​​ကျေးမှူ့အရာမှာ ကမ္ဘ္ဘာက အသိအမှတ်​ပြုထားရတာ….. မြန်​မာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ဂုဏ်​ကျက်​​သ​ရေ….. မြန်​မာ့အိ​နြေ္ဒ ၊ မြန်​မာ့ယဉ်​​ကျေးမှူ့ဟန်​ပန်​​တွေက မြန်​မာအမျိုးသမီး ​ တော်​​တော်​များများ​ကြောင့်​ ပျက်​ဆီးခဲ့ရတယ်​(မြန်​မာ့ယဉ်​​ကျေးမှူ့နဲ့ အညီ​နေထိုင်​တဲ့ မိန်းက​လေးအချို့​တော့ရှိပါတယ်​) အရင်​တုန်းက ​ဟောလိဝုဒ်​ဇာတ်​ကားရိုက်​ဖို့ မြန်​မာမင်းသမီးကို ငှါးတဲ့အခါ ဇာတ်​ကားတစ်​ခုလုံးမှာ […]
iPhone သုံးစွဲသူတွေ ကိုယ်တိုင် မသိသေးတဲ့ အလွန်အသုံးတည့်တဲ့ လျို့ဝှက်နံပါတ်တချို့
iPhone ဟာ သူ့ရဲ့အံ့မခန်းဖွယ် အသွင်အပြင်၊ ဒီဇိုင်းပုံစံတွေကြောင့် လူတွေကို ရူးသွပ်သွားစေကာ ကမ္ဘာမှာ လူကြိုက်အများဆုံး ဖုန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လူသန်းချီ iPhone ကိုင်ကြပေမယ့် ဒီကိရိယာမှာ လျို့ဝှက်ထားတဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် feature အချို့ကို သတိမထားမိကြပါဘူး။ အဲဒါက iPhone သုံးစွဲသူအများစု မသိကြတဲ့ လျို့ဝှက်ကုဒ်နံပါတ် the […]
စည်ပိုင်းပေပါလုံးတွေကို ဘီးတပ်ရထားတွဲလုပ်ပြီး ကလေးတွေ ကျောင်းကြိုပို့နေတဲ့ ရွာသားကြီး
သြစတေးလျမြောက်ပိုင်း Newman မြို့နဲ့ ကီလိုမီတာ (၇၀၀) ကွာဝေတဲ့ ဝေးလံသီခေါင်လှတဲ့ Punmu မျိုးနွယ်စုတို့ နေထိုင်ရာရွာကလေးမှာ ရွာခံအမျိုးသားကြီးတစ်ယောက်ဟာ စည်ပိုင်းပေပါလုံးတွေကို တစ်ခြမ်းဖျက်၊ ဘီးတပ်ပြီး၊ လယ်ထွန်စက်နောက်မြီးကနေ မြွေရထားတွဲပုံစံ ဖန်တီးပြီး ရွာကကလေးတွေကို ကျောင်းကြိုပို့လုပ်ပေးနေတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ သူတို့ကျောင်းကလေးတော့ ကျောင်းသားပေါင်း (၄၀)ရှိပြီး၊ မူကြိုမှ အသက်(၁၂)အရွယ် […]
လူတစ်စုဘဲ ပြည့်စုံတာပါ တလောကလုံးငတ်နေကြပါပြီ ဆိုကဲ့ ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင် ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း
၀ါရင့်သရုပ်ဆောင် ဒေါ်စန်းစန်းဝင်းဟာ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံဘ၀နဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူမဟာ သရုပ်ဆောင်ရာမှာလဲ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကနေ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် ထားနိုင်သူလဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခေတ်တစ်ခါက သူမဟာ ပိုင်ဆိုင်သမျှ၊ ရှိရှိသမျှ အရာတွေကို ထုခွဲရောင်းချပြီး မင်းသမီး၊သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် ” ဖရဲသီးစိတ် ချိုချိုလေး ” ဆိုတဲ့ […]
ရွှေတိဂုံဘုရားကို နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာဖို့ ဆိုတာ မသေခြာ တော့ဘူးဆိုတဲ့သူနှစ်ယောက်
“ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ လူနှစ်ယောက်” ================================================ ကျွန်တော်က ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်ပါ။ကျွန်တော် လူ၂ယောက်ကို ဧည့်လမ်းညွှန် ဝန်ဆောင်မှု ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အင်္ဂလန်က သားအမိပါ။အမေက ၇၂ နှစ် , သား ၅၀ နှစ်။ သူတို့တွေက အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် ခံယူထားသူတွေပါ။ သက်သတ်လွတ်ပဲ စားတယ်။ နေ့တိုင်း […]
ဆံပင်ကျွတ်တာ သက်သာပြီး အုံကောင်းကောင်းနဲ့ ဆံပင်အရှည်သန်စေဖိုပ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ ။ ယခုခေတ်မှာ ဆံပင်ကျွတ်တာဟာ ကြုံတွေ့နေကြ ပြဿနာ တစ်ရပ်ပါပဲ ။ဆံပင်တွေ ကျွတ်ရင်းနှင့် တဖြေးဖြေး ဆံပင်နည်းလာပြီး ထိပ်ပြောင်တာ ၊ ထိပ်ကွက်တာတွေ ဖြစ်ကုန်တာပါပဲ ။ဒီလို ဆံပင်တွေ မသန်စွမ်းရတဲ့ […]